Madaxweynaha Puntland oo Madaxtooyada Garoowe kulan kula yeeshay Madaxda Hay’addaha UN-ka iyo kuwa NGO-ga. – Somnews
Madaxweynaha Maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa qasriga Madaxtooyada Garoowe kulan kula yeeshay madaxda Hay’addaha UN-ka iyo kuna NGO-ga ee ka hawl -gala Puntland.
Muhiimada kulankan maata uu madaxweynaha Puntland la yeeshay Hay’ada UN-ka iyo Kuwa NGO-yada ayaa waxay ahayd la xisaabtanka Hay’adahaasi shaqada dalka ay ka qabtaan iyo sidii wax looga qaban lahaa waxyeelada ay reebtay abaartu.
Dhinaca kale Madaxwqeynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kulan ka furay ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in laga diyaar garoobo abaaraha soo noqnoqday iyo mustaqbalka sidii wax looga qaban lahaa, isla markaana waydiiyey Hay’adahaasi qorshaha uga degan ka hortaga abaaraha, waxqabadkoodii xiligii abaarta iyo sidii ay uga qayb qateen gurmadkii loo fidinaayey dadka abaartu waxyeelaysay.
Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu horayn sheegay in hay’addaha UN iyo kuwa NGO-ga ay Puntland waxbadan ka qabteen, isla markaana ay dedaal badan muujiyeen xiligii adkaa ee ay jirtey abaartu, waxaana uu kubooriyey inay sii wadaan dedaalka iyo dardargelinta shaqooyinka muhiimada u leh shacabka Puntland.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland oo kahadlay saamaynta abaartii baaxada lahayd ee ka dhacday guud ahaan Geyiga Soomaalidu degto ayaa shegay in ay reebtay raad ay adag tahay inay ka soo kabtaan dadka xoola dhaqatada ahi madaama ay kabaxeen in badan oo kamida dadkaasi xoolihii ay manaafacaadsan jireen abaartaasi darteed.
Somalia: World Bank approves US$50 million in support of emergency drought response and recovery